AKHRISO:- Antonio Guterres oo aqbalay go’aankii Dowladda Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAKHRISO:- Antonio Guterres oo aqbalay go’aankii Dowladda Soomaaliya
AKHRISO:- Antonio Guterres oo aqbalay go’aankii Dowladda Soomaaliya
05/01/2019 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa lagu sheegay in xoghayaha Guud uu aqlabalay Go’aanka Dowladda Federaalka ay ka qaadatay Wakiilkii gaarka ahaa ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom,kaasoo ahaa inaan dalka laga rabin kana sii shaqeyn Karin (persona non grata).
Wuxuuna Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres sheegay inuu soo magacaabayo Wakiil cusub oo Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Xoghayaha Guud wuxuu sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabay Mr. Haysom,islamarkaana uu ahaa shaqsi khibrad leh oo la ixtiraamo lehna door hoggaamineed oo muhiim ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in go’aanka dowladda ee (Persona Non Grata) aanay qaban xubnaha Qaramada Midoobey, loona isticmaali karin shaqaalaha UN-ka, sida uu qabo heshiiska Diblomaasiyadda ee Vienna ee 1961, balse arrintaas ay tahay mid loo adeegsado wadamada, sidoo kalena aanay Qaramada Midoobey aheyn dal.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa xaqiijiyay in shacabka Soomaaliyeed kaalmaha hore kaga jiraan dalalka baahiyaha weyn u qaba taageerida Qaramada Midoobay,waxayna Qaramada Midoobay shaacisay iney sida ugu haboon u gudaneyso fulinta taageeradeeda Soomaaliya.
Madaxweyne Trump oo ku hanjabaya xaalad deg deg ah oo uu u adeegsado dhismaha Derbiga
Madaxweyne Mareykanka oo go’aan adag ka qaadanaya muranka miisaaniyadda dalkiisa